Basikety - Coupe du Président : Hangotraka ireo lalao manasa-dalana -
AccueilSongandinaBasikety – Coupe du Président : Hangotraka ireo lalao manasa-dalana
Basikety – Coupe du Président : Hangotraka ireo lalao manasa-dalana
14/04/2018 admintriatra Songandina 0
Tonga amin’ny tsontsori-mamba hisarahana. Izay no azo ilazana ireo ekipa eo amin’ny sokajy N1A lehilahy sy vehivavy miatrika ny fiadiana ny « Coupe du Président » amin’ilay atao hoe Top 8 eo amin’ny taranja basikety. Hetsika andiany fahefatra mizotra amin’izao fotoana izao, etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina.
Araka ny fandaharam-potoana mantsy, dia miditra amin’ny lalao manasa-dalana ity fifaninanana goavana eo amin’ny taranja basikety ankafizin’ny maro ity anio. Saika tafakatra hiatrika izany avokoa ireo ekipa goavana lahy sy vavy. Hangotraka araka izany, ireo lalao manasa-dalana rehetra anio.
Miavaka amin’ireo andiany telo telo aloha ihany koa mantsy ity “Coupe du Président” eo amin’ny taranja basikety ity tamin’ity taona 2018 ity. Maro ireo fampisehoana tazana mandritra ny fifaninanana. Ao ny fampisehoana tanterahin’ireo mpanakanto, toa an’i Stéphanie, Shyn, Rak Roots, Smaven… Tsy vitan’izay ihany anefa fa misy ihany koa ireo fampisehoana maro samihafa.
Tanjona amin’ny fiadiana ny “Coupe du Président” ny fampifandraisana ireo faritra maro eto Madagasikara, satria nisy fifaninanana sy fifanintsanana mantsy tamin’ireo faritra voafidy, izay niraisan’ireo Faritra 22. Ireo ekipa tafavoaka tamin’ireo toeram-pifaninanana tany amin’ny Faritra kosa no miatrika ny dingan’ny famaranana antsoina hoe Top 8, izay mandeha amin’izao fotoana izao etsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina.
Marihina fa nampitondraina ny lohahevitra “tanana miara-milalao, mifandray, mandroso” ny fiadiana ny “Coupe du Président” hatramin’izay. Ireo ekipa manana herijika sy mendrika kosa no ho tafavoaka, ary handrombaka ny amboara.